तरिका पुर्याएर पानी पिउदा पनि तौल घट्छ जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
यस्ताे तरिका पुर्याएर पानी पिउदा पनि तौल घट्छ
दिनमा एकै पटक ऊँटले जस्तै एकै पटक धेरै पिउन भन्दा पनि दिनभरमा नौ–दश पटक थोरै–थोरै पानी पिउने । यसरी पिउदा शरिरमा पानीको मात्रा सन्तुलित हुन्छ र तौल समेत घट्छ ।
दिउसो सोडा पानी वा जुस पिउनुको सट्टा सादा पानी नै पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । यसले शरिरमा सुगरको मात्रा घटाई तौल घटाउन सहयोग गर्छ ।
चिया वा कफी खानुभन्दा अगाडि आधा वा एक गिलास पानी पिउनै पर्छ । यसले शरिमा एसिडको असर र वजनलाई नियन्त्रण गर्छ ।
नास्ता गर्नु भन्दा करिब एक घण्टा अगाडि वा नास्ता गरेको एक घन्टा पछि १ गिलास पानी पिउने ।
बिहान वा बेलुका खाना खानुभन्दा भन्दा २० मिनेट पहिले १ गिलास पानी पिउने । यसले ओभर डाइटिङबाट बचाउँछ र तौल घटाउँछ ।
सुत्नु भन्दा केही घन्टा पहिला एक गिलास पानी पिउने । यसरी पानी पिउदा खाना पछि केही खान मन लाग्दैन र बिहान उठ्दा शरिरमा रहेका हानिकार तत्व पानीसँगै बगेर जान्छन् ।
Don't Miss it आँखाबाट आशु झरीरहन्छ ? यस्ता छन् केहि घरेलु उपाय
Up Next सील प्याक गरिएको खानेकुरा खानुहुन्छ ? खासगरी महिलाले यस्तो खतरनाक समस्या झेल्नु पर्छ
स्थानीय स्तरमा यत्रतत्र पाइने तितेपातीका के-के फाइदा छन् ? जान्नुहाेस्
स्थानीय स्तरमा यत्रतत्र पाइने तितेपाती औषधीको काम मात्र होइन धार्मिक कार्यमा समेत उपयोगी हुने गरेको छ । बास्नादार यो खाने…